येशू ख्रीष्ट हाम्रो मात्र आशा, मानिसको पतन &# | Apg29
पहिले नै 1 उत्पत्ति3मा, हामी परमेश्वरको योजन
यो विश्वास नलाग्दो भयो; परमेश्वरको बलिदानको आफ्नै येशू ख्रीष्ट पाठो अगाडि आए। उहाँले धर्मशास्त्रको Pentateuch बलिदान देखि अगाडी औंल्याए थियो।
यो3भागहरु कि पतन, मुक्तिको, औचित्य परमेश्वरको योजना को लाग्न र भाग3को एक श्रृंखला येशूको अनुयायीहरू सूचना पवित्रीकरण सामना गर्नेछ भाग 1 छ। यो पोस्ट, भाग 1 मा, म येशूको बलिदानले लिङ्क गरिएका पतन र प्रतिज्ञा गरिएको मुक्तिदाता उद्धारको परमेश्वरको योजना र पुरानो नियममा बलिदानको महत्व मा, माथि हुनेछ।
सर्पले गरेको छली झूट
1 उत्पत्ति3सर्पले (शैतानको) परमेश्वरको विरुद्धमा पाप आदम र हव्वाले प्राप्त गर्न कसरी व्यवस्थापन वर्णन गर्दछ। भगवान पहिले 1 उत्पत्ति 2:17 मा एडम भन्नुभयो थियो "तर तपाईं खान छैन, दिन मा तपाईं यो खान लागि मर्नेछन् राम्रो र खराब को ज्ञान को रूख को।" हामी हव्वाले सर्पले गरेको छली झूट कुरा सुने कसरी पढ्न "तिमीहरूले पक्कै पनि मर्न छैन।" उनले निषेध रूखको फल को खान को प्रलोभन मा दिनुभयो, र आदम प्रलोभनमा मा दिनुभयो। र आफ्नो पाप मा, परमेश्वरको विरुद्धमा अनाज्ञाकारिताले, तिनीहरू मरे त, तिनीहरूले आध्यात्मिक मृत्यु, र अब उनीहरू त्यहाँ, नाङ्गो unclothed उभिए।
म नग्नता मुख्य रूप परमेश्वरको महिमा को कमी केन्द्रित लाग्छ। रोमी 3:23 "सबै पाप र परमेश्वरको महिमा छोटो आएका छन्।" प्रकाश 3:18 मा हामी नग्नता बारेमा पनि पढ्न र कल संग आफूलाई ढाक्न सेतो लुगा किन्न भने। 1 उत्प3पनि कसरी आदम र हव्वाले पतन पछि, बगैंचामा परमेश्वरले पैदल सुने, र कसरी तिनीहरूले उहाँलाई लुकेको बताउँछ।
परमेश्वरले आदम सोध्दा, "तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ?" उहाँले जवाफ हुनेछ, "म बगैंचामा तपाईंको आवाज सुने, र म नाङ्गो थियो किनभने म डर थियो। र म लुकाउनु भएको थियो। "तपाईं यो पाठ पढ्न गर्दा हामी पापको परिणाम सबैभन्दा गम्भीर हेर्नुहोस्। पवित्र परमेश्वर र मानिस बीच सहभागिता भङ्ग भएको थियो। यो भङ्ग समुदाय पनि परमेश्वरको लागि कस्तो विशाल पीडा भएको हुनुपर्छ!
उहाँले चाहन्थे थियो भने मानिस सिर्जना गर्न थियो थिएन, तर अब त्यो गरे। उहाँले आधारित उनको नि: शुल्क विकल्प आफै मानिसको घनिष्ठ सम्बन्ध छ चाहन्थे। यो घनिष्ठ सम्बन्ध दाऊदले भजन 25:14 मा, "प्रभु hobnob, उहाँले तिनीहरूलाई थाह बनाउँछ करारको उहाँलाई डर गर्नेहरूलाई साथ।" वर्णन यसरी हामी पाप कि मृत्यु संसारमा आउनुभयो कारण कसरी हेर्नुहोस्।
रोम 5:12 मा "एक मानिस पाप पाप मार्फत संसार र मृत्यु प्रवेश गरेर रूपमा, त्यसैले, र किनभने सबै पाप मृत्यु त, सबै मानिसहरू आए।", हामी पढ्न
परमेश्वरको योजना आकार लिन सुरु
पहिले नै 1 उत्पत्ति3मा, हामी परमेश्वरको योजना आकार लिन सुरु कसरी हेर्नुहोस्। हामी परमेश्वरको येशू ख्रीष्ट बुझाउँछ कि आउँदै मुक्तिदाता, महिला सन्तानको प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ कसरी पढ्न। "उहाँले आफ्नो टाउको नाश गर्नेछ," परमेश्वरले सर्पले भन्नुहुन्छ। प्रकाश 20 मा हामी शैतानको जस्तै हो जो ख्रीष्टको निश्चित पुरानो सर्प भन्दा, विजय को पढ्नुहोस्। पाप परमेश्वर र मानिस विभाजित जो कि त थियो।
हामी परमेश्वर, सिकार समावेश गर्न अरूलाई बीचमा पाप बलिको र आफ्नो पापको लागि दोषबलिको कहिलेकाहीं इस्राएलीहरूलाई atone कसरी छनोट विशेष गरी3उत्पत्ति मा, Pentateuch मा हेर्नुहोस्। यी सिकार येशू ख्रीष्ट र हाम्रो खातिर उहाँको बलिदानरूपी मृत्युको अगाडी इशारा थिए। जब जन उहाँले बलिदानको पाठो र पाप कि अवधारणा परिचित थिए जो मान्छे बोल्नुहुन्छ जब येशूलाई "परमेश्वरका थुमा," देख्दा यूहन्ना 1 भन्छन् देखि।
दुवै3MOS 16 र हिब्रू9हामी प्रायश्चितको, एक वर्ष एक पटक उच्च पुजारी आफ्नै लागि प्रायश्चित्त को रगतले र मानिसहरूको पापको लागि Holies को पवित्र प्रवेश गर्दा दिन को ठूलो दिन को पढ्नुहोस्। हिब्रू9मा हामी पढ्न ख्रीष्टले कसरी सबै आफ्नै रगतले स्वर्गमा Holies को पवित्र प्रविष्ट, र अनन्त छुटकारा जित्यो एक पटक। हामी येशू ख्रीष्टमार्फत हाम्रो पाप देखि उद्धार गर्दै हाम्रो पाप बलिको भयो! कसरी ख्रीष्टको परमेश्वरको दोष बिना आफूलाई प्रस्ताव यसलाई बताउँछ। पद 22 "व्यवस्था रगतले, र रगतको कुनै छूट बगाउने छ बिना लगभग सबै पर्ज।" भनेर भन्छन्
आफ्नो बलिदानरूपी मृत्युको मार्फत येशूले हाम्रो लागि परमेश्वरको अनुहार अघि देखा पर्न स्वर्ग नै प्रवेश। हिब्रू 10:19, 20 "भाइहरू, येशूको रगतको शक्ति, अब हामी निर्धक्क भई holies, त्यो पर्दा हामीलाई लागि खोलिएको जो नयाँ र जीवित बाटो, भन्न छ कि, आफ्नो शरीर पवित्र जान सक्नुहुन्छ।" मन्दिरको पर्दा , यो सबै भन्दा पवित्र देखि पवित्र विभाजित कि बाक्लो पर्दा थियो। रूपमा लामो पर्दा अझै पनि त्यहाँ थियो, त्यसैले यसलाई holies को पवित्र मा तत्काल तरिका, परमेश्वरको मा आफूलाई सबै लागि खुला र निःशुल्क थियो सङ्केत।
येशू क्रूसमा मृत्यु जब पर्दा तल माथि बाट फुट्छ कसरी, यो वर्णन गरिएको छ। मान्छे अब परमेश्वरको नजिक सहभागिता फेरि येशू ख्रीष्टको तिनीहरूले विश्वास भने बाँच्न र आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा उहाँलाई स्वीकार, धन्यवाद गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबल पनि एक दिन, एक नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी परमेश्वरले आफूलाई मान्छे संग हुन र तिनीहरूलाई रहन हुनेछ जब एक दिन त्यहाँ हुनेछ प्रकाश 21 मा बताइएको छ। पाप गरेको विनाशकारी प्रभाव बाट पूर्ण बहाली, येशू ख्रीष्ट र उहाँको पूर्ण विजय मार्फत हुनेछ। त्यो दिन मा उहाँले हाम्रो आँखाबाट आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। मृत्यु थप, न शोक होइन, न त रो, न त विपत्ति हुनेछ।
हामी थाहा ख्रीष्टको पूर्ण नाश र सबै दुष्ट शक्तिहरू र शक्तिहरु र dominions अन्त गर्नेछन् जब दिन आउनेछ देखि 1 कोरिन्थी 15:24, 25। सबै शत्रुलाई उहाँको पाउमुनि राख्नु हुनेछ (येशू ख्रीष्ट छ सर्प टाउको महिला सन्तानको द्वारा smashed थियो कसरी 1 उत्पत्ति3मा प्रतिज्ञा सम्झना)। पद 1 कोरिन्थी 26 15, "पछिल्लो शत्रु मृत्यु सबै शक्ति को deprived।" भन्छन्